Umkhiqizi kanye nomhlinzeki we-PD 3.0 Isitolo esidayisa yonke impahla | BWOO
Uhlolojikelele lweshaja ye-PD 3.0:
Imodeli Yomkhiqizo: CDA68
Igama lomkhiqizo: 20W PD 3.0 ishaja
Ukufaka: Amandla amakhulu, i-AC 100-240V
Itheku: Imbobo yohlobo olulodwa olulodwa
I-plug: i-plug yase-UK, i-EU plug, i-plug yase-US, eyenziwe ngezifiso
Iphakheji: Ibhokisi lephepha elidayisa amafasitela avulekile nge-blister
Isitifiketi: CE / UL / FCC / Rohs, njll.
Izici zeshaja ze-PD 3.0:
Ngokwethulwa kochungechunge lwe-iphone12, ishaja ye-20W PD 3.0 ibe yishaja ethengisa kakhulu. Ishaja ye-PD 3.0 ihlanganisa izinzuzo zendlela yokushaja esheshayo, ngazo zombili izinhlobo zamandla aphezulu nezindlela zamanje ezinkulu. Noma kunezinqubo ezahlukahlukene zokushaja ngokushesha emakethe, amadivayisi amaningi nokuningi asekela iProtocol ye-PD, ishaja ye-PD 3.0 iba umkhuba omkhulu ngokusebenza kwayo okuphezulu nokuhambisana okubanzi.
Ukuvikelwa okuningi. Nge-smart chip esakhelwe ngaphakathi, ishaja ye-BWOO 20W PD 3.0 ingakwazi ukuqashelwa kwemodi yamandla okuzenzakalelayo. Ukukhishwa kwamandla okukhaliphile, ukuvikela okushisa ngokweqile, ukuvikela umthwalo ongaphezulu, ukuvikelwa kwamanje, njll.
Sheshisa ukushaja izikhathi ezingaphezu kwezingu-3, ​​konga isikhathi sakho kakhulu. I-iphone 8 nochungechunge lwe-iphone lwamuva olunomsebenzi wokushaja okusheshayo, ishaja ye-PD 3.0 ithuthukisa ukusebenza kahle kokushaja kuze kube izikhathi ezi-3 ngokuqhathaniswa neshaja yendabuko engu-5V / 1A.
Ulwazi olwengeziwe mayelana nokushaja okusheshayo:
Kunezinqubomgomo eziningi zokushaja okusheshayo ze-chip ye-IC emakethe, ezivame kakhulu kufaka iPD, QC, PEP, Huawei FCP, Oppo VOOC, njll. Manje umehluko kanjani walezi Zivumelwano Zokushaja? Ukushaja okusheshayo kusetshenziswa kanjani emhlabeni?
Kukhona izixazululo ezimbili eziyinhloko zokubona ukushaja okusheshayo: eyodwa ngamandla aphezulu / ukushaja okusheshayo kwamanje, enye ingugesi ophansi / ukushaja okusheshayo okukhulu kwamanje.
Isixazululo sokuqala, ukushaja okusheshayo okunamandla kagesi / okuphansi, okujwayelekile yiQualcomm Quick Charge, i-PEP, iHuawei FCP, njll. Okuwukukhulisa amandla kagesi wokushaja ngenkathi kushajwa, ukuze kuthuthukiswe amandla okushaja. Ekushajeni okujwayelekile kwefoni ephathekayo, amandla kagesi ka-220V ancishiselwa ku-5V ngokusebenzisa ishaja yefoni ephathekayo, bese isekethe langaphakathi lefoni lilahla amandla ka-5V laya ku-4.2V bese lidlulisela amandla ebhetri. Kodwa-ke ukukhokhisa okusheshayo okunamandla aphezulu / okuphansi manje ukukhulisa amandla okukhipha kweshaja yefoni ephathekayo engu-5V kuye ku-7-20V, bese kunciphisa amandla kagesi abe ngu-4.2V ngaphakathi kweselula.
Isixazululo sesibili sokushaja okusheshayo yi-voltage ephansi / yamanje enkulu, okuwukuyivimba ngesekethe efanayo ngaphansi kwamandla athile (4.5V-5V). Emandleni kagesi avamile, ingcindezi encane isabelomali ngasinye sabelana ngemuva kokudonsa ngokufana. Ngokunjalo nakumakhalekhukhwini, isifunda ngasinye sizokwenza ingcindezi encane. Kungagwema amandla aphezulu ashisayo abangelwa ukuguqulwa "kwengcindezi ephezulu kuya kwengcindezi encane" ngaphakathi kwefoni ephathekayo. Amaphrothokholi ajwayelekile ashaja ngokushesha nalesi sixazululo yi-Oppo's VOOC neHuawei's Super Charge.
Kodwa-ke, umthetho olandelwayo wePD 3.0 uhlanganisa izinzuzo zephrothokholi yokushaja esheshayo emakethe bese uzihlanganisa kabusha zibe yisixazululo esisheshayo esisheshayo. Ngasikhathi sinye, ishaja ye-PD 3.0 ifaka i-voltage ephezulu / i-low current ne-low voltage / yamanje enkulu. Amandla alo wokukhipha amandla alawulwa: 3.0V ~ 21V. Ngaphezu kwalokho, i-voltage amplitude modulation step ingama-20mV, futhi umqondo jikelele uhlanganisa i-high voltage / low low ye-Qualcomm QC Quick Charge (the same step amplitude modulation voltage iqinisekisa ukusebenza kahle kokushaja) kanye ne-low voltage / high current ye-VOOC Flash charge .
Ngamadivayisi eselula amaningi asekela i-PD Protocol, ishaja ye-PD 3.0 iba mkhuba omkhulu ngokusebenza kwayo okuphezulu nokuhambisana okubanzi.
Langaphambilini Ipulagi yeshaja yefoni
Olandelayo: Ishaja ephathekayo 10000mah
Ishaja ye-iphone 12
Ishaja engenantambo ye-Iphone
Ishaja engenantambo yefoni
Ephathekayo Ishaja Iphone
Ishaja Ephathekayo Ephathekayo
Ishaja yefoni engenantambo
Amashaja wefoni angenantambo
Ipulagi yeshaja yefoni
Iselula Adapter 2.4A Max
Ishaja ephathekayo yodonga
2.4A Ishaja yefoni ephathekayo